Weedhsan - Kulmiyaha Maanta – W/Q. Cabdibaasid Cismaan
Kulmiyaha Maanta – W/Q. Cabdibaasid Cismaan
Xisbiga Kulmiye oo muddo ku siman siddeed sanno ahaa xisbi mucaarad kii ugu xoogganaa, uguna siyaasadda durugsanaa tan iyo intii Somaliland u gudubtay hannaanka xisbiyada badan,
wuxuu soo maray marxalado kala geddisan iyo maalmo aad u adkaa. Wuxu ka soo dabbaashay mawjado culus iyo muranno siyaasadeed oo birta layska aslay. Legdan badan iyo loollan ba’an oo siyaasadeed ayaa si is-dabajoog ah uga dhex aloosnaa xisbiga dhexdiisa, oo ay sabab u ahayd jabbaabiirta iyo hormuudka siyaasyiinta Somaliland ee xisbiga ku bahoobay ee uu gadhwadeenka u ahaa madaxwaynaha talada dalka haya Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Tartan kasta oo xisbiga dhexddiisa yaallay ma noqon mid ku abuura burbur, qas, iyo qalalaase siyaasadeed oo kala qaybiya qoorwaynta xisbiga ama ay ku kala tagaan. Wuxuu xisbigu hore usoo galay guud ahaan doorashooyinkii dalka ka qabsoomay (2 doorasho gole-degaan, 1 doorasho baarlamaan, iyo 2 doorasho oo madaxtooyo ah), waxaannu saddex jeer oo ka mid ah doorashooyinkaas galay kaalinta labaad, halka laba ka mid ah uu ku guulaystay kowaad. Dabcan, maaha wax fudud xisbi mucaarad ah oo ka jira afrika uu galo afar doorasho oo kala geddisan islamarkaana muujiyo awoodda intaa leeg iyo dedaalka baaxaddaa leh ee aynu kor ku xusnay, ugu dambayna hantiyo kalsoonnida codka shacabka kuna guulaysto gabi ahaan talada dalka. Xaaladaha qallafsan iyo duruufaha adag ee xisbigu soo maray, wuxuu kaga gudbay xal waara oo ku dhisan midnimo, muqaallafo iyo maan wadajira. Run ahaantii, wuxuu ahaa xisbi dhisan oo isku dhan islamarkaana leh hadaf iyo ujeeddo midaysan oo hal ah.
GUDDOONKII MADAXWAYNE SIILAANYO:
Madaxwaynaha talada dalka haya Md Siilaanyo, oo ka mid ah hormuudka iyo foollaadka siyaasiyiinta reer Somaliland islamarkaanna caan ka ah guud ahaan geyiga soomaali, wuxuu ahaa aasaasihii iyo hoggaankii xisbiga Kulmiye. Waxa runtii lagu tilmaamaa inuu yahay gurgurshaa hayin ah iyo awr gaaddiid qaad ah oo leh xeellad uu ku xalliyo xaaladkasta oo cakiran. Madaxwayne siilaanyo, wuxuu ahaa guddoomiyihii ugu muddada dheeraa jabahaddii SNM ee calanka somaliland ka dhashay, waxaannu leeyahay taariikh hoggaamineed oo guun ah. Wuxuu ahaa mishiinkii iyo daynabadii dhalisay guushii xisbiga kulmiye ku hantay talada dalka. Waayo-aragnimada Md Siilaanyo iyo xeeldheerrida siyaasaddiisa bisil, waxay geyaysiisay midaynta ashkhaas fikir, aragti iyo ujeeddaba aad u kala fogaa. Wuxuu lahaa burji iyo buruud uu wax ku kala bayaansho. Wuxuu muujiyey dhabar=adayg iyo dhibirsannaan dhankasta ba leh. Wuxuu la yimi tanaasul, dulqaad iyo gaylan adag si, hankiisa iyo damaciisa siyaasaddeed u hirgalo. Ugu dambayn, Md.Siilaanyo, way rumowday rajadii uu muddooyinka badan halganka iyo raacdada u galay, waxaannu noqday Madaxwaynaha Qaranka JsL.
KALA-ASOORRIDDA HOGGAANKA XISBIGA IYO XUKUUMADDA:
Taariikhdu markay ahayd 04/08/2010, waxa madaxwayne siilaanyo oo afartameeyo cisho qasriga madaxtooyada ku sugnaa wareejiyey hoggaankii xisbiga, waxaa na si ku meelgaadh ah loogu cimmaamaday Md. Muuse Biixi Cabdi, oo markaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee xisbiga. Sida la sheegay, go’aannada shirkii golaha dhexe ay xisbigu musharrax madaxwayne ugu doorteen Md.Siilaanyo ee ka qabsoomay magaalada Burco, ayaa dhigayey sidatan. Shirwaynihii 5aad ee xisbiga, waxa markale xilka guddoomiyenimo iyo musharrax madaxwayne laysugu tolay oo taajka loo saaray Md.Muuse Biixi Cabdi. Laga soo bilaabo maalintaa, waxaa xisbiga ka muuqday habqan, habacsanaan iyo kala daadsannaan baahsan oo sababay is=qabqabsi iyo is-fahan waa ka dhashay wada shaqayn la’aanta xisbiga iyo xukuumadda. Dastuurka dalka ayaa waajib yeelay cidkasta oo damac leh siyaasi ah uu kasoo baxo axsaabta qaranka, wuxuu na reebay dul-carar kasta oo ku yimaadda sifo aan waafaqsanayn shuruucda dalka. Waa xaqiiq in xukuumadda maantu ka timi xisbiga Kulmiye islamarkaana xummaanteeda iyo samaanteeda ama guusheeda iyo gefafkeeduba xisbigu la wadaago. Waxa marar badan warbaahinta laga arkaa is-diiddooyin ka dhex muuqda hoggaanka xisbiga iyo xukuumadda.
MAXAA IS BEDDALAY?
Xilka iyo madaxtinnimada midna laysuma hadyeeyo, mana aha wax dhayal loo helo ama si dhibyar loo hantiyo, waxay se ku xiran tahay kartidaada qofnimo iyo kaalintaad is dhigto. Aragtida ah xilbaan rabaa laygu tolo mana lihi xiskaan ku xaalayn lahaa xaalladaha taaggan, waxay la mid tahay qof ambaday oo aan markii hore meel u socon; Tusaalle waxaa ka dhigan hoggaanka xisbiga Kulmiye ee marin habaabshay hannaankii iyo horumarkii xisbigu hayaanka dheer u galay, kana dhigay hawo been ah iyo hal bacaad lagu lisay. Waa hubaal iyo xaqiiqa jirta hoggaan xummida hilfaha u laabtay xisbigii Kulmiye in uu aabbe u yahay guddoonka habacsan iyo garashada tabaalaysan ee guddoomiye Muuse Biixi oo waa isaga is=baddelka ku yimi xisbiga. Shaki kuma jiro inay hallaysay wax badan siyaasadda taagta daran ee ku binaysan ad-adayga, qallafsannaanta, qabyaaladda mutuxan, qof jeclaysiga iyo is=mahadinta Muuse Biixi. Guddoomiye Muuse Biixi, wuxuu ku noqday xukuumadda laf dhuungashay iyo mas ay qoorta ku sidato, oo sahayday kaadiriin badan oo xisbiga kaalin wayn ku lahaa ay ka dareeraan. Lama arag xisbi iyo xukuumaddiisii oo kala socda, lama na arag hal xisbi oo toban farraar leh. Waxa muuqata in guddoomiye muuse biixi tahli waayey isku=haynta xisbiga islamarkaanna suurtagal ahayn isla si-ahaanta xisbiga oo ay ku kala faataxaystaan farriiqooyin fara badan. Waxa soo yaraanaysa taageerradii baaxadda lahayd ee xisbigu ku lahaa bulshada dhexdeeda. Rajo xummida soo waajahday Kulmiye waxay rubbad-goyn ku tahay dooniskasta oo xisbigu rabo inuu hantiyo hoggaanka dalka, waxay sido kale waxba la’aan u tahay Md. Muuse Biixi (karis xun iyana wax ku la’).
Marka laga tago siyaasadda hor-iyo-dabadiidka ah ee hoggaanka xisbiga Kulmiye, waxa iyana ku lammaan kooxo iyo xubno Muuse xushay si ay ula garabgalaan hagista hawlaha xisbiga bal se, noqday kuwa horseed ka ah hagardaamada xisbiga iyo haddimooyinka haysta, oo ay waliba Guddoomiye Muuse hayb=wadaag iyo deegaan ba yihiin. Waxay isugu jiraan masuuliyiin iyo saraakiil mansab ka haya qaybaha kala duwan ee xisbiga heer qaran, gobol/degmo illaa dhallinyarro iyo ganacsato war ma qabto ah oo guud ahaan dalka ku cusub. Waxay dagaal ba’an kula jiraan xukuumaddii xisbigu dhalay. Sida la sheegay, waxay musdambeed u yihiin Guddoomiye Biixi oo shiidaaliya, sababtaas awgeed ayaa wasiir Maxamuud Xaashi iyo rag uu ku jiro la filayaa in ay meel kale u sahan dirtaan.
Ugu dambayntii, soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “Ruqay ninkii lahaa dabada hayaa ma kacdo”.
Cabdibaasid Cismaan Jaamac “Dhuuxweyne”
Facebook: Abdibasid Osman
Qalinleyda © WeedhsanCorporation